Global Voices teny Malagasy · 20 Jolay 2019
20 Jolay 2019
Tantara tamin'ny 20 Jolay 2019
Nanamarika ny bilaogera manerana izao tontolo izao ny fiakaran'ny vidin-tsakafo manerantany. Mandikateny sy mandrohy ireo tsikaritry ny olon-tsotra manoratra amin'ny bilaogy any amin'ireo firenena maro ny Global Voices. Iankinan'ny ain-dehibe izany ho an'ny sasany, fa helingelina kely fotsiny ho an'ny hafa.
Torolalana momba ny famoahana lahatsoratra indray
Avoaka eo ambanin'ny fahazoan-dalanaCreative Commons Attribution-Only license ny votoaty rehetra avy amin'ny Global Voices. Afaka mizara, mamoaka indray, mandika amin'ny fiteny hafa na manakambana ny tantaranay ianareo rehefa manondro sy mampifandray mazava tsara ny Global Voices sy ny mpanoratra ho toy ny loharanom-baovao.
Raha te-hiditra amin'ity tranonkala ity ianao no sady handefa ny lahatsoratrao voalohany mandritra izany, dia ampiasao azafady ny endrika etsy ambany mba handefasana ny lahatsoratrao sy ny sarinao voalohany. Raha vao tafavoaka izany, dia hahazo ny kaontinao manokana ianao: toy ny amin'ny tranokala GV hafa.